अव पशुलाई पनि ८ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने ! हेर्नुस के के गर्न पाईदैन ? लगाए के कारवाही हुन्छ ?
ARCHIVE, NEWSPAPER » अव पशुलाई पनि ८ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने ! हेर्नुस के के गर्न पाईदैन ? लगाए के कारवाही हुन्छ ?
काठमाडौं – पशुलाई मानिसले आफूखुसी जति समय पनि काममा लगाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले बन्देज लगाउने कानुन ल्याएको छ । पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पशु कल्याण निर्देशिका, ०७३ जारी गर्दै पशुलाई अधिकतम ८ घन्टा मात्रै काममा लगाउन पाइने प्रावधान ल्याएको हो । यो खजर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । त्यति मात्र होइन, वृद्धावस्थामा पुगेको पशुलाई कामबाट निवृत्त गरी पशुधनीले उचित हेरचाह गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशिकामा समेटिएको छ । मानिसलाई दैनिक अधिकतम ८ घन्टासम्म काममा लगाउन पाइने व्यवस्था विश्वका अधिकांश मुलुकका श्रम ऐनले गरेको छ । पशुपक्षीलाई काममा लगाउँदासमेत समयसीमाको व्यवस्था नेपालमा पहिलोपटक ल्याइएको हो ।